Shiinaha Rubber Stator Iyo Rotor Of Machine mashiinka Flotation iyo alaab-qeybiyeyaasha | Arex
Rubber Stator Iyo Rotor Of Mashiinka Flotation
The stator iyo rotor, inta badan loo isticmaalo mashiin sabeynta ee taxanaha XJK, taxane XJQ, taxane SF, taxane BF, taxane ah KYF, taxane XCF, taxane JJF ah, taxane BS-K.
Rotor iyo stator ee mashiinka sabeynta waxaa inta badan ka kooban gelin qalfoof bir iyo caag xiran-u adkaysta. Dhexgalka qalfoofka birta waxaa laga sameeyaa goynta ololka horumarsan ka dibna si sax ah ayaa loogu dhejiyay heerarka nidaamka adag. Awoodda iyo isu-dheellitirka waxqabadka gelinta qalfoofka waxaa lagu damaanad qaadayaa isku dheelitirka ogaanshaha iyada oo loo marayo isku-dheellitirka miisaanka. Rotor caag ah iyo stator ee mashiinka sabeynta dusha sare waxay ku xirnaayeen caag duug ah u adkaysta ka dibna vulcanized heer kul sare
Shirkadeenu waxay leedahay 3600 tan oo saxan weyn oo fidsan oo vulcanizer ah waxayna leeyihiin awood ay ku soo saaraan rotor iyo stator mashiinka sabeynta dhexroor 200 ilaa 2400 mm. Haddii dalabku ka sii khaas yahay, waanu u habeyn karnaa iyadoo loo eegayo shuruudaha macaamiisha.
Astaamaha qalabka caagga ah
Xoog siligga ≥
Acid (sal) isuduwaha 20% H₂SO₄ （20% NaOH） 18 ℃ x24h
Kordhinta nasashada ≥
Adag xeebta A
Isku dheelitirka hawo kulul ≥90 ℃ x24h
Biraha iyo adhesion lakabka≥
Jeexitaanka cillad joogto ah≤
Isku-darka saliidda 20 # saliid 100 ℃ x24h
1. Iska caabinta xoqida
2. Iska caabin ilmada
3. Caabbinta saamaynta
4. Degganaanta kiimikada
5. Cimri dheer
1.Baadhitaanka qaababka labbiska iyo qiimeynta aagga muhiimka ah iyo xoojinta astaamaha iyadoo loo marayo nidaamka shaqada.
2. Adoo u isticmaalaya cinjir ka badan ama maadada polyurethane meesha aad ugu baahan tahay qaybta oo dhan. Tanina waxay dheereyn doontaa nolosha shaqada.
3.Giving kormeer xirfadeed iyo dayactir markii ay isticmaalayaan macaamiisheenna. Iyo helitaanka warbixinta cusbooneysiinta joogtada ah ee howlaha hawlgalka, kaas oo keenaya isla markaana kordhin doona helitaanka dhirta.
1.Waxaa ceeriin ah waxay isticmaaleysaa 3CR12 madaxda birta ah ee birta ah, haddii ay dhacdo miridhku iyo qaanuunka qufulku.
Jawaab celinta alwaaxda ee heerarka ISO ee shaqaale khibrad leh isla markaana dheelitirka iyo saxna ku hayaan markay jeexayaan.
Shaqada la qabsiga waxay kuxirantahay baahida macmiilka ama xalka ka hel kooxdayada teknolojiyadda.
Hore: Polyurethane Stator Iyo Rotor Of Mashiinka Flotation
Xiga: Polyurethane Steel tuuboyinka
Polyurethane Stator Iyo Rotor Of Mashiinka Flotation